Wargeyska “AS” oo shaaca ka qaaday mudada la filayo inuu garooma ka maqnaan doono Ronaldo… (Miyuu seegi doonaa kulanka Ajax?) – Gool FM
Wargeyska “AS” oo shaaca ka qaaday mudada la filayo inuu garooma ka maqnaan doono Ronaldo… (Miyuu seegi doonaa kulanka Ajax?)
Dajiye March 27, 2019
(Yurub) 27 Maarso 2019. Mid ka mid ah wargeysyada kasoo baxa gudaha dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday mudada la filayo in uu garoomada ka maqnaan doono xidiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo ayaa la kulmay dhaawac dhanka muruqa ah inta lagu gudi jiray kulankii ay ku wada ciyaareen xulalka Portulgal iyo Serbia kulan ka tirsanaa isreeb reebka koobka Euro 2020-ka.
Qoraal rasmi ah ee kasoo baxay kooxda reer Talyaani ee Juventus ayaa lagu sheegay in Cristiano Ronaldo uu maray dhowr baaritaano caafimaad, taasoo lagu ogaaday inuu dhaawac ka soo gaaray muruqa bowdada ee lugta midig, iyadoo aan la qeexin mudada uu garoomada ka maqnaan doono.
Sida laga soo xigtay wargeyska caanka ah “AS” ee dalka Spain Cristiano Ronaldo ayaa la filayaa inuu garoomada ka maqnaan doono mudo dhan 10 ilaa iyo 15 maalmood, taasoo macnaheedu yahay suurtagalnimada uu kaga qeyb gali karo kulanka la sugayo in kooxaha Juventus iyo Ajax ay ku wada ciyaaraan wareega 8-da ee tartanka Champions League.
“Ma jiro farqi u dhaxeeya Solskjær iyo Mourinho”…. Louis van Gaal